Ogaden News Agency (ONA) – Gudiga Jaaliyada Ogaadeniya Ee Melborn oo Kulan Isugu yimaaday.
Gudiga Jaaliyada Ogaadeniya Ee Melborn oo Kulan Isugu yimaaday.
Posted by Wariye Qaran	/ February 26, 2018
Waxaa kulan muhiima isugu yimaaday gudiga Jaaliyada Ogaadeniya ee Melborn wadanka Australia, kulankan oo ahaa mid abaabul iyo xogwaraysi ayaa waxaa lagu qabtay xafiiska jaaliyada Ogadeniya ee Melborn.
Shirkan ayaa waxaa furay gudoomiyaha Jaaliyada Mudane Xassan Qubi wuxuuna kasoo jeediyay qudbad uu gudiga ugu xogwaramayay xaalada guud ee halganka Ogaadeniya iyo kala yaaca gumaysiga Itoobiya sidoo kale wuxuu gudoomiyuhu ka waramay wadahadaladii dhawaan ku dhex maray wadanka kenya JWXO iyo gumaysiga Itoobiya.
Waxaa kale oo xaalada guud ee halganka kawar bixiyay mudane Mohamed Sheekh Abdulahi Hikam asagoo aad ugu tiiq tiiq saday gumaysiga gabalkiisii dhacay ee TPLF waxaa kale oo uu ka waramay in shacabka Ogaadeniya looga fadhiyo inay fadhiga ka kacaan una diyaar garoobaan taliskan sii dhacaya sidii ay isu raacin lahaayeen ugana faa iidaysan lahaayeen.
Shirka ayaa waxaa kale oo lagu garfeeyay fikradana la isku way daarsaday xaalada jaaliyada iyo sidii loosii xoojin lahaa abaabulka jaaliyada, gudiga ayaa sidoo kale wuxuu dajiyay qorshaha bishan soo socda ee jaaliya.
Shirka ayaa gabagabdii wuxuu kusoo dhamaaday si guul ah waxaana lagu balamay in lasii laban laabo halganka kaalinta kaga aadan Jaaliya.